एसियन कप छनोट: नेपालको समुहमा को-को पर्लान? | Hamro Khelkud
एसियन कप छनोट: नेपालको समुहमा को-को पर्लान?
क्वालालम्पुर (एजेन्सी) – आगामी मार्च महिनाबाट सुरु हुने एएफसी एसियन कपको छनोट चरणको ड्रका लागि एएफसीले वरियता सार्वजनिक गरेको छ।
छनोटमा २२औं वरियता पाएको नेपालसंगै पट’डि’मा मलेसिया, सिङ्गापुर, कम्बोडिया, भुटान र मकाउ रहेका छन्। २४ टोली सहभागी हुने छनोटमा ६ समुहमा चार-चार टोलीलाई विभाजन गरिने प्रावधान रहेको छ। समूह चरणको अन्त्यमा शिर्ष दुइ टोलि एसियनकपका लागि छनोट हुनेछन।
शीर्ष ६ टोली पट ‘ए’मा रहनेछन् भने तलका ६ टोली पट ‘डि’मा रहनेछन्। पट ‘बि’ र ‘सि’मा भने वरियतामा ७-१२ र १३-१८औं स्थानमा रहेको टोली रहनेछन्।
एक समुहमा प्रत्यक पटको १-१टोली समावेश गरेर चार टोली छनोट गरिन्छ। पट ‘ए’ मा जोर्डन, ओमान, फिलिपिन्स, बहराइन, किर्गिस्तान र उत्तर कोरिया रहेका छन् भने पट ‘बि’मा भारतसंगै प्यालेस्टाइन, भिएतनाम, ताजिकिस्तान, हङकङ र तुर्कमेनिस्तान रहेकाछन्। पट ‘सि’मा भने माल्दिभ्स, यमन, लेबनान, अफगानिस्तान, चाइनिज चाइपेई र म्यानमार छन्।
छनोट अन्तर्गत नेपाल र भारत एउटै समुहमा पर्ने सम्भावना बलियो छ। पट ‘डी’मा रहेको नेपाल र पट ‘बि’मा रहेको भारत एकै समुहमा पनि पर्न सक्छन। नेपालको समुहमा भुटान, मकाउ, कम्बोडिया र सिङ्गापुर भने नपर्ने निश्चित छ।
छनोट चरणको पहिलो खेल मार्च २७, २०१७मा हुने पक्का भएको छ।